Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2010
2010-03-31 @ 10:43 in Politika
Elaela no tsy nanoratra ny tena. Niniana ihany rehefa nodinihana na dia mety ho nisy aza ny fahakamoana. Ankatoky ny herintaona nandrombaham-pahefana indrindra izany fotoana nanoratana farany izany. Sorena ny tena tamin'izany fotoana izany, noho ny filazan'ny mpitarika hoe hofaranana ny tolona, ary dia karazan'ny nofaranan-dry zareo tokoa tamin'io tsingerintaon' io fandrombaham-pahefana io. Efa miharihary izao fa tsy maintsy hisedra baomba manempotra raha vao miditra an-dalambe izany fa dia natao ihany. Raha mitarika ireo olona ry zareo leoko ihany fa dia tsy hitahita satria matahotra ny hosamborina angamba. Olona iray ihany no mahasahisahy vinany... dia ilay tsy tian-dry zareo hosamborina satria tsy misy dikany na dia mba mpitarika ao amin'ny mpandala ny ara-dalàna ihany aza. Fa hisy aloha ny fihomehezana raha hisy ihany ny fisamborana azy...
Tsy manana paika atokona intsony ve ireo mpitarika ny mpandala ny ara-dalàna? Eo amin'ny lafiny toe-tsaina rehefa ny zavatra no niorina herintaona dia karazan'ny tafajoro tsara izy na misy aza ny manelingelina. Fahadisoana ny tsy mba hihainoan-dry zareo mihitsy ny tolo-kevitry ny olo-tsotra hoe ataovy isan-kerinadro io tolona io fa lavitr'ezaka ny tolona mitandro ny filaminana fa dia nosisihana notontosaina isan'andro ihany, tsiniako ao anatin'izany ihany koa ny filoha Ravalomanana iray amin'ny nandrisika izany tolona isan'andro izany ka nahatonga ny tsikera hoe tena tsy mahalala ny zava-misy aty an-toerana marina fa an-tsesintany.
Tsingerina tsy nankalazaina
Eo ankilan'izay, na dia feno herintaona nitondrana aza ry zalahy dia tsy afa-nankalaza azy tamim-pilaminana sy firavoravoana kosa. Ny hany nitatatata dia ny radiom-pirenena sy ny teleizionam-panjakana, nefa propagandy famerimberenana mandrakariva ny hoe nametra-pialana fa tsy naongana no hany niverimberina tanaty fifanazavana. Tsy nandrenesana akony kosa (na tsy nandrenesako no marina kokoa) ny nataon-dry zareo tany an-takonana any, ho fiarahana tamin'ny mpanohana azy ireo. Ninia nidina an-dalambe ihany koa tsinona ireo mpikatroka tamin'ny tolon'ny ara-dalàna na dia fantany izao aza fa "tsy hahomby" ny zavatra ataony... izany hoe ho ravan'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika. Ny zavatra iray tena niavaka nandritra ny herinandro nisian'izay fidinana an-dalambe tsy nisy mpitarika izay dia ny tsy nisian'ny tora-bato na herisetra mihitsy avy amin'ny mpandala ny ara-dalàna.
Mila fanazavana kely ity: nisy ny filazana fa nisy polisy nodarohan'ny mpanao fihetsiketsehana, gazety iray no nanitrikitrika satria nahita imaso mivantana, gazety Taratra io, fa nanao lozam-pifamoivoizana tamin'ny scooter nentiny io polisy naratra mafy nolazaina fa nodarohan'ny mpanao fihetsiketsehana io. Na dia nilaza aza ny gazety hafa hoe novonoina io, ary nanaovan'ny fitondrana fampielezan-kevitra izany, dia tsy nivena tamin'izay nolazainy kosa ny tao amin'ny gazety Taratra. Toa tsy mba nisy nanamarika io toe-javatra iray io. Faharoa, raha nisy fisamborana olona tamin'ny andro voalohany noho ny fananganana barazy nataon'izy ireo. Rehefa natao ny famotorana dia "mpitsikilon'i Alain Ramaroson" no navaliny ireo mpanao famotorana, araka ny tatitra nataon'ny gazety ihany. Taorian'izay dia tsy nolazaina intsony ny tohin'ny fanadihadiana... Navotsotra daholo angamba ry zalahy? Io no tsy itsaharako mandrakariva ilazako fa misy olona misovoka mandrakariva any anatin'ny mpitolona any. Ny fisamborana hafa tamin'ny andro hafa nalaza moa dia momba an'i Solohery Hilaire mivady sady miaraka amin'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana no mpikatroka ao amin'ny MFM ihany koa (kasikety roa).
Dia tonga ny 29 marsa 2010
Noheverina ho rava tanteraka ny tolon'ny mpandala ny ara-dalàna rehefa nosesefana baomba manempotra isan'andro isaky ny mivorivory an-dalambe. Noheverina fa hangina tsy hiloa-bava, sady tsy hanelingelina intsony ny asan'ny mpanongam-panjakana, ireo nampanginina sy nampitahorina isan'andro. Kanjo mbola nijoro hatrany ireo reny nifamotoana teny Ambohijatovo. Efa fantatra ihany ny fanao amin'ny fotoana tahaka itony nefa dia amin'izay indrindra no anehoana ho hitan'ny rehetra ny nokobonin'ny sasany nandritra ny fotoana nampanginana azy tamin'ny famoretana izany. Nampisongadina azy rahateo ny fitafiana fotsy sy ny voninkazo nanamarika mandrakariva ny hetsika an-dalambe fanaony. Tsy azo nampanginina kosa ry zareo teto sady ho sarotra ny hampangina azy teto Ambohijatovo.
Rehefa nihirahira teo ireo vehivavy mpandala ny ara-dalàna dia avy kosa ry mpiambina maimai-poana ny kianjan'ny 13 mey sy Analakely ary Antaninarenina ho takalon'ny fahazoan'izy ireo matory eny amin'ny toerana azon'izy ireo atoriana nanatona sy nifanasa vava tamin'ireo vehivavy efa naka ny toerany teo andrefana somary atsimon'ny kianjan'Ambohijatovo. Mandeha ny fifampikasokasohana sy ny filana ady. Ny tanjona tao anatin'izany paika izany moa dia ny hikisahan'ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna ka ry zareo mpiambina ny kianja 13 mey, tsy dia misolo akanjo loatra, ihany no hanotrona izay misy eo amin'ny kianjan'Ambohijatovo, na ny marina kokoa eo amin'ny tsangambato. Tsy zakan'ny tovolahy mpandala ny ara-dalàna ny karazana fanositosehana ny reniny sy ny anabaviny ka dia nidaroka amin'izay ry zalahy. Fo ranomafana io! Misy ny fahadisoana saingy fiarovan-tena ihany koa io no sady fakana vahana amin'ny toerana ijoroana. Tafampita nanakaiky kokoa ny fiandrasana fiara fitateram-bahoaka ny mpandala ny ara-dalàna. Nikisaka nankeny atsinanan'ny mpivaro-boky Ambohijatovo kosa ireo mafana fo tamin'ny mpanohana ny TGV.
Fantatra tsara fa tsy ho afaka hanao na inona na inona eo Ambohijatovo mihitsy ny mpitandro ny filaminana raha mbola misy lanonana tsy natomboka teo. Sady tsy ho afaka ny hisambotra izy no tsy ho afaka handefa baomba manempotra raha tsy tiana hivadika zavatra hafa ny raharaha. Noho izany, ny misoroka izay mety ho fihoaram-pefy ihany no sisa atao. Raha toy izany hatrany no ataon'ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny hetsika an-dalambe dia mahazo voninahitra izy, saingy eto moa lanonana no atrehina ka izay vao fantany ny tokony hatao, fa rehefa tsy hisy ny lanonana fa misy ny fidinana an-dalambe dia ravana amin'ny baomba avy hatrany... na tsy nisy mihitsy aza ny filazana ny firenena ho latsaka an-katerena, hanaovana fanapahan-kevitra tahaka izany.
Samy nanana ny toerany araka ny firehan-keviny noho izany ny olona teo Ambohijatovo tamin'ity andro ity. Ny mpanohana ny TGV saiky ny ilany somary atsinanan'ny tsangambato no misy zy ireo. Ny ilany andrefana kosa an'ny mpandala ny ara-dalàna. Misy fifanakaikezana ratsy dia ratsy ihany eo amin'ny roa tonta na izany aza!
Tsy maintsy nisy ny fandaminana niova
Noho ny horakoraka nataon'ny mpandala ny ara-dalàna, sy ny fifandrangitana nifanaovany tamin'ny kolonely Baomba dia sahirana tokoa ny mpandamina sy ny mpitandro ny filaminana. Teto ny Kolonely baomba izany no tsy afa-nisambotra ny mpanakorontana, rehefa tafiditra ao anaty fanakorontanana ny fitabatabam-panoherana tsy manaiky ireo lazaina ho ofisialy ho mpitondra; fa voasazy ireo aminy. Raha tokony hatrety amin'ny ilany andrefana no nidiran'ny PHAT tamin'ny karipetra mena dia voatery natodika tany avaratra somary atsinanana misy ireo mafana fo amin'ny TGV kosa izany. Heverin'ny mpandala ny ara-dalàna ho fandresena ho azy sahady izany ka nampisy horaka teo amin-dry zareo. Nahatafiditra baolina izy ireo izany.
Manaraka izany, lasa natao karazana fefy faharoa manampy ny mpitandro ny filaminana ireo fiaran'ny manampahefana isan-karazany ka nanaratsy endrika ny lanonana sy ny toerana. Natao tsara ambina ireo manampahefana, ary nihataka lavitra ny ilany andrefana izy ireo fandrao tratran'ny tora-bato. Io tora-bato io tsy voatery ho avy amin'ny olona eritreretinao fa saintsaino ihany fitantarana nataoko ery ambony rehefa tratra ireo nanakan-dalana teny Anosy ny andron'ny 16 marsa 2010. Tsy voatery ho natahotra avokoa ireo manam-pahefana fa misy koa ny nandranitra, tahaka an'Atoa Organes minisitry ny filaminana anatiny izay vantany vao niala ny fiarany dia nisosososo teny amin'ny mpandala ny ara-dalàna no nanao ny marika V. Fireharehana ihany koa ny azy eto.
Vetivety monja dia vita ny fotoana rehetra, folo minitra raha ela indrindra. Noho ny hafanam-po dia saiky voahoraka hatramin'ny hiram-pirenena, saingy tonga saina ihany angaha ny mpandala ny ara-dalàna ka somary nangina teo. Ny ankoatra izay kosa dia tsy nijanona intsony ny horaka sy ny kiakiaka nampikorontana tanteraka ny lanonana.
Tsy maintsy izay no ambetin-teny raha nahita ny toe-javatra. Ireo mpomba ny TGV raha nahita ny hafanampon'ny ara-dalàna dia nifampilaza hoe izay no nanakaramana azy ireo. Ny mpandala ny ara-dalàna kosa raha nahita ny fahasahisahian'ny TGV (tokoa ve raha ireo mpangataka manaraka anao eran'ny tsena avokoa izy ireo?) nihantsy ady tamin'ny vehivavy legalista dia nihevitra ireo mpangataka ireo ho nokaramaina ihany koa. Misy tamin'ireo nahita ny fahasahian'ny legalista no nilaza fa vao vita ny lanonana dia ho avy amin'izay ny fandraofana ireo sahisahy maty ireo. Misy ny tena lotika mihitsy ny fo. Zava-misy sy hitako teny an-toerana ireo. Noho izany, maromaro ihany koa ireo niala raha vao vita fanoloram-bonikazon'ny ofisialy sao izay vao tena raikitra amin'izay ny gidragidra. Mazava loatra fa nofaranana tamin'ny baomba manempotra indray ity lanonana ity fa tsy teny Ambohijatovo fa efa teny anoloan'ny lapan'ny tanàna. Mbola voninahitra ho an'ny mpandala ny ara-dalàna ihany izany nandarohana baomba azy ireo izany satria ry zareo ihany no nikendrena.
Soa ihany fa nisy iny fiara nitondra fanamafisam-peo iny nanala ny olona teo Ambohijatovo mba nisorohana izay mety mbola ho fifandonana tsy nampoizina. Tsy vao izao tsy akory ny nisiana lanonana voaelingelina tahaka izao fa efa nisy koa ny fotoam-panokafana ny antenimieram-pirenena nandritra ny taompolo 1990 no niharan'izany horakoraka izany. Tanjona ny handrenesan'ny any ivelan'Antananarivo rehetra any, manerana an'i Madagasikara, fa mbola mahatafita hafatra hatrany ny mpandala ny ara-dalàna na dia efa nogiazana aza ny feony. Rehefa namory mpanao gazety ry zareo hanamelohana ny zava-misy dia tratra teo amin'ny maharary azy ihany izany ireto tsy mety laitran'ny fanasaziana avy any ivelany ireto.
Ilay resaka voninkazo nopotehina, ahoana ny amin'io?
Satria manko samy mihevitra ny andaniny fa tena tsy tia tanindrazana mihitsy ny ankilany, dia tahaka izany ihany koa ny sain'ny ankilany mihevitra ny andaniny. Izay rehetra ataon'ny iray dia toherin'ny iray hafa, tonga hatramin'ny fanazimbazimbana aza. Dia ireo voninkazo ireo no amantarana fa tena efa mihalalina tanteraka ny hantsana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Noho ny tsy fanekena hiara-mitantana ny firenena mandra-pisian'ny fifidianana hahalalana izay voafidim-bahoaka tokoa dia tsy maintsy ny fifandrafesana no manjaka. Raha tsy nomena toerana na aiza na aiza mihitsy ny fanehoan-kevitra dia tsy maintsy imasom-bahoaka sy hitan'izao tontolo izao no ivoahan'ny tsy fetezan-javatra misy eto madagasikara. Tena fihoaram-pefy tokoa ny nataon'ny sasany tamin'ny famotehana voninkazo fahatsiarovana izay mora malazo sy mora simba ihany koa saingy endriky ny fahapotehan'ny fihavanana eo amin'ny samy Malagasy iny. Endriky ny fahapotehan'ny soatoavina Malagasy mora potika sy malazo ihany koa rehefa tsy nokolokoloina.
Tsy vahaolana velively ny fifampiangana sy fifanilihana andraikitra tamin'iny toe-java-nitranga teny Ambohijatovo iny fa samy tompon'andraikitra avokoa ny Malagasy rehetra na ny mpiandany safobemantsina rehetra, na ireo milaza ny tenany na amin'iza na iza indrindra fa ireo izay mihalangalana milaza ho tsy miditra amin'ny raharaha politika.
Jentilisa, 31 marsa 2010 amin'ny 02:37